Ihe ị ga - ahụ ma mee na nleta gị na Scotland | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | Getaways Europe, Ido Scotland, General
Scotland karịrị Edinburgh, agbanyeghị na anyị niile ga-ekweta na ịhụ obodo a na ụlọ ya bụ ihe ekwesiri. Enwere ọtụtụ ihe ọzọ ị ga-ahụ na Scotland, site n'okirikiri ala ọhịa na obodo ndị mara mma n'akụkụ osimiri, saịtị akụkọ ihe mere eme jupụtara na akụkọ ifo na ihe omimi. Yabụ anyị nwere ike gaa chee echiche maka ihe niile anyị na - eme Ọ ga-amasị m ịhụ site na Scotland.
N’ala ndị a ị ga-akwụzite ụgbọ ala ka ị nwee ike ihu akụkụ ndị ahụ pụrụ iche. Ha Okirikiri ala Ha na-emeri onye ọ bụla, mana omenala ha, ndị obodo ha na obodo mara mma na obodo ndị a ka nwere ọtụtụ ụlọ na-ekwu maka oge ndị ọzọ, dịka nnukwu ụlọ. You chọrọ ịma ntakịrị ihe banyere Scotland?
2 Ugwu di elu
3 Routezọ nke ụlọ ndị a
4 Isle nke Skye
5 Gaa Leta wiski
6 Osimiri Ness
Ọ bụrụ n’otu obodo anyị ga-ahụ na Skọtland, ọ bụ Edinburgh. Ya ama nnukwu ụlọ, emi odude ke nnukwu ugwu Ọ bụ nleta anyị na-agaghị agbaghara. Mana enwere ọtụtụ ihe, ebe ọ bụ na n'otu ụbọchị, anyị agaghị enwe ike ịhụ ihe niile na obodo a mara mma. Gaa na Royal Mile, okporo ámá ya a ma ama, ma ọ bụ lee Castro Holy Cast, ụlọ obibi nke Queen nke England n'ala Scotland. Nke a bụ obodo na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, yabụ anyị ga-ahụkwa ogige ntụrụndụ mara mma, dịka Calton Hill ma ọ bụ Ogige Royal Botanical.
Ọ bụrụ na ihe ịchọrọ masịrị gị oge dị n'etiti okike okike, anyị na-agba gị ume ka ị chọpụta ugwu ugwu Scottish. Mpaghara a nke dị na mgbago ugwu Scotland bụ ebe mmadụ bi n'ihi ihu igwe ya, mana na nloghachi ọ ga-ekwe omume ịnụ ụtọ ọdịdị ala mara mma ebe ahịhịa na anụmanụ na-etolite n'enweghị nkwụsị. E nwere nnukwu ọdọ mmiri, ugwu na ọnụ ọnụ ugwu ga-efunahụ n’ala ndị jupụtara na mma. Mana obi abụọ adịghị ya na ụzọ kachasị mma iji hụ ha bụ mgbe ihu igwe dị mma, ebe ọ bụ na n'oge oyi ọnọdụ dị oke njọ.
Routezọ nke ụlọ ndị a
Ọ bụrụ na enwere ihe ị ga-eme mgbe ị gara Scotland ọ bụ ụzọ nke ụlọ ndị ahụ. Hụ ụlọ ya kachasị mkpa nwere ike ịbụ njem dị egwu, ebe ọ bụ na ha bụ ihe owuwu mara mma nke ukwuu ma chebe ọtụtụ n'ime ọnọdụ zuru oke, nke ọ bụla nwere akụkọ ihe mere eme ya na nkọwa ya. Onye ọ bụla nwere ike ịme ụzọ ahaziri iche nke ụlọ, na-ahọrọ ndị si n'okporo ụzọ ụgbọ ala, ma ọ bụ ndị kachasị mkpa ha hụrụ n'ụzọ. Na mgbakwunye na Edinburgh Castle, nke doro anya na ọ kachasị nleta, enwere ndị ọzọ nwere ike ịdị mkpa. Na Castlọ siri ike, nke dịdebere ụfọdụ ọnụ ọnụ ugwu ma bụrụ nke echekwara nke ọma. Eilean Donan Castle bụ otu n’ime ihe ndị kachasị mma ma dị n’agwaetiti, nke jikọtara ala site na akwa mmiri dị warara, na-eme ka ọ bụrụ ụlọ ukwu Scottish anyị niile chọrọ ịhụ. Dunvegan Castle dị na Isle nke Skye wee laghachi na narị afọ nke XNUMX. Ndị a bụ ụfọdụ ụlọ ndị anyị kwesịrị ịgụnye na ụzọ anyị.
Isle nke Skye
Isle nke Skye dị na mgbago ugwu ọdịda anyanwụ nke Scotland, ọ bụkwa ezigbo paradaịs nkịtị. N'agwaetiti ahụ, enwere obere mmadụ bi na ya iji nọrọ na ya, ị ga-agarịrị na Castle Dunvegan, mana n'ezie ihe kachasị amasị ebe a bụ ọdịdị ala ya. Na Neist Point Lighthouse Ọ bụ ebe a na-atụ aro ka ị hụ n'àgwàetiti a, tinyere ụfọdụ ụzọ ụkwụ na-aga n'okporo ụzọ, dị ka Quiraing ma ọ bụ Fairy Pools. Agwaetiti a juputara na uzo di warara ma di warara na uzo ije, ma o bu mgbe ahu ka anyi ga ahu ebe kachasi nma ma di egwu.
Gaa Leta wiski
Obi abụọ adịghị ya na Scotland bụ ala wiski, anyị enweghị ike ịhapụ ohere iji nwaa mmanya ha kacha mma. Otú ọ dị, maka ndị hụrụ ụdị ihe ọ drinkụ drinkụ a ka nwere ọtụtụ ihe, n'ihi na n'ime Scotland ọ bụla, e nwere ihe karịrị otu narị distilleries dị iche iche ma ha aghọwo ebe nlegharị anya ọzọ na mba ahụ. Anyị ekwesịghị ịgakwuru ha niile, n'ihi na ha ga-enwe usoro yiri ya, mana ọ dị mma ịga distillery a ma ama iji mụta banyere usoro niile nke ịme wiski kacha mma n'ụwa. Ihe ka n'ọnụ ọgụgụ na-enwekwa ntụrụndụ nke wiski iji mụta ọdịiche na nkọwa. Ha na-emeghekarị ruo elekere ise nke ehihie, yabụ ị ga-eji ohere hụ ha ma nwee ọ enjoyụ na njem ahụ nwayọ.
Anyị enweghị ike ịkwụsị ịga ebe kpọtere anyị ịtụnanya. Ma maka ịbụ ebe mara mma na maka ihe omimi nke yiri ka ọ gbara ya gburugburu. Anyị na-ekwu n'ezie Ọdọ Ness, ọdọ nke di n’etiti ihe okike n’ime ya nke enwere ọtụtụ narị ịgba akaebe na-azọrọ na ha ahụgoro ihe okike elongated na ya. Ee, anyị na-ekwu maka Loch Ness Monster, o doro anya na akụkọ obodo mepere emepe mana nke ahụ yiri ka a ga-ekwenye ya mgbe niile na akaebe ọhụụ. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmata, anyị agaghị enwe ike ịkwụsị ịnyagharị ụgbọ mmiri na ọdọ mmiri na igwefoto dị n'aka, ọ bụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ihe ị ga-ahụ ma mee na nleta gị na Scotland
Ndewo ... Achọrọ m ịga ngwa ngwa na onye mụ na ya ga-aga Scotland iji mee ụzọ nke ụlọ ndị ahụ ... ọ bụrụ na ị nwere ike iziga m ọnụahịa na njem ị ga-eme otu izu, m ga-enwe ekele maka ya. Echiche kacha mma.
Zaghachi JA García